Umhlaza kunye nokuhambelana kweScorpio: ♥ Umdlalo wenziwe ezulwini - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Umhlaza kunye nokuhambelana kweScorpio: ♥ Umdlalo wenziwe ezulwini
Umhlaza kunye ne-Scorpio benza isibini esihle ngenxa yokukhula kwabo ngokweemvakalelo. Fumanisa ukuba kutheni le nto bephakathi komdlalo onamandla kunayo yonke imiqondiso yeenkwenkwezi.
Oku kubhangqwa yenye yezona midlalo zibalaseleyo kuyo yonke i-zodiac. Olu lwalamano luyahambelana kuba lumele ukuhlangana kweempawu ezimbini zamanzi, ezabelana ngokuhambelana okuphezulu kweemvakalelo kunye nokuqondana. Zombini iimpawu zinobuntununtunu obungenakuthelekiswa nanto kunye nothando lobomi. Zinomdla, zizele luvelwano, kodwa zinomona kakhulu! Ewe kunjalo, le manyano ngokuqinisekileyo iya kuba yeyona ilungileyo iqabane ngalinye elinamava ngalo. Fumanisa inqaku lokuhambelana komhlaza kunye ne Scorpio kwaye ulungiselele ukumangaliswa!
'Umhlaza kunye neScorpio zilungele omnye komnye!'
Umhlaza kunye nenqaku lokuhambelana kweScorpio: 5/5
Ezi zimbini Iimpawu zamanzi zenzelwe enye! Njengovelwano, ubuntununtunu, imiphefumlo enomdla kakhulu, ngokwendalo ikwilungu elifanayo lobude! Ubuntu beScorpio buhambelana ngokwengqondo novakalelo lweCancer. Yintoni uCancer ayinika iScorpio kukukwazi ukuzola xa ujongene noxinzelelo. Ngothando, baziva bemanyene ngamandla omlingo. Rhoqo, baziva ngathi zezomnye nomnye, ezinokuthi zibe zezakho.
Ngaba le duo iza kusebenza ekuhambeni kwexesha?
Ewe banako! Umhlaza kunye ne Scorpio ngokuchanekileyo yintoni efunekayo ukugqibezela ubomi bomnye nomnye kwaye ubudlelwane babo ngokuqinisekileyo buya kuba bomlingo. Nangona, yabo umona kunye nokuziphatha okukhoyo kunokubathoba kwaye ubahlukanise. Xa kuvela iingxabano nokungavumelani, indlela yokuziphatha komntwana yeCancer inokucaphukisa iScorpio, ethi yona isabele ngokuqatha. I-Scorpio yemveli iyayithanda kwaye iyayiqonda kakuhle iCancer kwaye kungekudala iguqula ukuqonda kwabo kube bubudlelwane bezothando. Bayayazi indlela yokujongana neemvakalelo ezibuhlungu ngovelwano olukhulu kwaye banokuzinikela ngokumangalisayo. Lo mqondiso unika iCancer ukhuseleko kunye nenkathalo abayinqwenelayo.
Inokuba yintoni imeko yokuwa kwesi sibini?
Bazi ndinomona kwaye ndinomona, ke kufuneka bazi ukuba bangabomnye nomnye. Ukuba akukhange kubenjalo, umhlaza, ngamanye amaxesha ubuntwana kwaye uhlaba, unokuphosa umsindo kwiScorpio oza kuziphindezela ngendlela enoburharha neyenzakalisayo. Kwaye njengeempawu ezintle zamanzi, banokudlala kakuhle intlekele yamaGrike.
Ngaba i-aquarius kunye ne-leo ziyahambelana
Le yenye indawo apho IScorpio ihlala ikhokelela kwindlela! Umhlaza, isithandwa sentliziyo ethambileyo, uya kulandela i-eroticism yeScorpio, kwaye uya kwenza konke ukukholisa iqabane lakhe alithandayo. IScorpio ngokuqinisekileyo iyinto ekhohlakeleyo kuneCancer kwigumbi lokulala, kodwa ukuba uMhlaza uziva ukhululekile, baya kuthi balandele ngovuyo. Phakathi kwale miqondiso mibini i-eroticism torrid. Ukwabelana kwabo ngesondo kunamandla, phantse ukuba nomsindo, kodwa kungaze kwenzeke ngaphandle kwemvakalelo. Ubusondeleyo buthatha inxaxheba ebalulekileyo kwesi sibini, akukho nto ikhe icocwe kwiindonga zegumbi lokulala.
Ingcebiso yothando kwesi sibini:
Sukutshintsha kwanto; umkhulu njengokuba unjalo! Intlonipho iya kubalulekile kwesi sibini apho iingxoxo zinokutsalwa khona. Lumka ungahambeli kude ukuze ungazisoli ngesenzo okanye ngegama.
Iimpawu zomlilo: Aries, Leo, Sagittarius; Funda malunga ne-Element yakho
inani leentsingiselo zeeroses
ukulukuhla umntu we-sagittarius
yintoni inyanga yam yelanga kunye nomqondiso ophumayo
Ingelosi inothando inombolo engama-99
Ithetha ntoni 3 33